Funga SeMunhu Akafuma. Taura SeMunhu Akafuma
"Hareruya! Akaropafadzwa munhu anotya Jehovha, Anofarira zvikuru mirairo yake. Vana vake vachava nesimba pasi; Rudzi rwowakarurama rucharopafadzwa. Fuma nezvakawanda zviri mumba make; Kururama kwake kunogara nokusingaperi" (Psalms 112:1-3).
Vakristu vane kodzero yekufuma. Vane kodzero yekuva nemari yakawanda. Asi kune vamwe vasingafungi kudero. Vanhu vakadai vane zvavasingazivi. Mwari vane vanhu vavanoda kuzikanwa navo. Vanhu ava vatatu. Tinovaverenga muBhaibheri. Vanoti, Abrahama, Isaka, naJakobo. Vanhu ava vakanga vakafuma zvikuru. Muna Eksodo 3:6, Mwari vakataura kuna Mosesi vachiti, "... Ndini Mwari wababa vako, naMwari waAbrahama, naMwari waIsaka, naMwari waJakobho ...". Unofanira kuverenga pamusoro pevanhu vatatu ava. Unozoshamiswa nekufuma kwavo.
Genesi 13:2 inotaura pamusoro paAbrahama. Inoti, "Abrama wakanga akafuma kwazvo. Aiva nemombe, nesirivha, nendarama". Bhaibheri rinotauravo pamusoro pemwanakomana wake. Mwanakomana uyu akanga ari Isaka. Tinoverenga nhoroondo yake muna Genesi 26:13-14. Rinoti, "Munhu uyu akava mukuru, akaramba achiwedzerwa, kusvikira ava mukuru kwazvo; akanga aine fuma yamakwai, neyemombe, nemhuri huru; vaFirisitia vakamugodora". Izvi ndizvovo zvakanga zvakaita Jakobo. Tinoverenga pamusoro pake muna Genesi 30:43. Zvinonzi, "Murume uyu akava mukuru kwazvo, akava nezvipfuwo zvizhinji, navaranda, navarandakadzi, namakamera, namadhongi".
Mwari vanofumisa vanhu. Havasarudzi. Vanofumisa vaya vanotevera Shoko ravo. Vanofumisa vaya vanoshandisa Shoko ravo pakurarama kwavo. Tinoverenga mashoko avo muna 3 Johane 1:2. Vakati, "Mudikanwa, ndinoshuva pamusoro pezvinhu zvose, kuti ubudirire, uve wakasimba, somweya wako uchibudirira". Iwe unogona kunge uri Mukristu. Izvi zvinoreva kuti uri muridzi wefuma yaMwari. Fuma iyi iri muzita rako, naKristu, muri pamwe chete. Izvi ndizvo zvatinoratidzwa muna VaRoma 8:17. Saka wava werudzi rwevafumi. Fuma iri munyika muno ndeyako. Ndeyako yose. Aya ndiwo mafungiro aunofanira kuita. 1 VaKorinte 3:21 inoti zvinhu zvose ndezvako. Bvuma kuti zvinhu zvose ndezvako. Funga semuridzi wezvinhu zvose zviri panyika. Taura semuridzi wezvinhu zvose zviri panyika pano. Ita semunhu asina chaanogona kushaiwa. Ita semunhu ajaira kuva nezvinhu zvakawanda.
Kuda wakambositamburira zvinhu muhupenyu. Kuda wakambosiva munhu anoshaiwa. Wava kufanira kushandura mafungiro. Shandura mutauro wako. Tanga kuvona zvinhu nenzira itsva. Ndiko kuti zvinhu zvishandukevo muhupenyu hwako. Izvi ndizvo zvatinokurudzirwa muna VaRoma 12:2. Inoti, "Musaenzaniswa nenyika ino; asi mushandurwe murangariro wenyu uchivandudzwa ...". Funga semunhu akafuma. Taura semunhu akafuma. Gara uchiita izvi. Zviite kusvika pfungwa dzekare dzabviswa. Zviite kusvika usisazvivoni semunhu ane chinhu chaanokoniwa kuita. Zviite kusvika wava kuzvivona semunhu akafuma chaizvo.
Ini ndiri mwana wedzinza raAbrahama. Ndini muridzi wenyika ino. Saka, hufumi hwangu hahuperi. Zvinhu zvose ndezvangu. Ndine matutu nematutu endarama. Handina chandinoshaiwa muhupenyu. Ndine fuma yandisingagoni kupedza ndoga. Ndinowana zvinhu zvose zvakanaka. Muzita raJesu. Ameni.